အေ​အေ နဲ့ ​အေ​အေ​အေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
History » ​အေ​အေ နဲ့ ​အေ​အေ​အေ	19
​အေ​အေ နဲ့ ​အေ​အေ​အေ
Posted by ムラカミ on Dec 24, 2014 in History | 19 comments
တီဗီ​အောက်​စက်​ စတာ​တွေရဲ့ ရီမုတ်​ကွန်​ထရိုး ကိစ္စ​လေ
အရင်​က ဘယ်​လျပ်​စစ်​ပစ္စည်းရဲ့ ရီမုတ်​ကွန်​ထရိုးမဆို AA ဘက်​ထရီ နှစ်​လုံးနဲ့ သွားခဲ့ကြတာမဟုတ်​လား
AA အစား ပိုငယ်​တဲ့ AAA ဘက်​ထွီ​တွေ အစားဝင်​လာကြတယ်​​လေ
မိဂီတို့က အဲ့ကတည်းက ဇာတိပြတာ
စကားဂျို စစ်​ဂ​နေချာတီဗီကြီးဝယ်​လာပီး ဘက်​ထွီရှာမရလို့​လေ ရီမုတ်​အတွက်​
အဲ့တုန်းက ရပ်​ကွက်​ထဲကဆိုင်​​တေမှာ AAAဘက်​ထွီ မတင်​ဘူးရယ်​ အနည်းဆုံး ဇီးသီးမတ်​​လောက်​​ပြေးမှ ၀ယ်​ရတာရယ်​ အဲ့တုန်းက ဇီးသီးမတ်​လည်း ခုလိုမ​ပေါ​သေး
ထားပါ​တော့ဗျာ က​နေ့​ခေတ်​မှာ​တော့ ရီမုတ်​​တွေအားလုံးလိုလိုရဲ့ ဘက်​ထွီ က AAA ဖြစ်​သွားရြသလို
ရပ်​ကွက်​ထဲက ကုန်​စုံဆိုင်​မှာလည်း အလွယ်​တကူ ၀ယ်​လို့ရ​နေပါပြီ
ကျ​နော်​သိချင်​တာက ​အေနှစ်​လုံးက​နေ ​အေသုံးလုံး revolution ဘာ​ကြောင့်​ဖြစ်​သလဲဆိုတာရယ်​
နည်းပညာ​လောကမှာ သည်​လိုတဆစ်​ချိုး​ပြောင်းလဲမှုမျိုး​တွေ ရှိ​​ပေမယ့်​ သည်​တခုက​တော့ ကျ​နော့်​ ​လေ့လာလိုက်​စားမှုအ၀န်းအ၀ိုင်းနဲ့ကွာခြားလွန်းသမို့
Ps တဆက်​တည်းမှာ ငယ်​ငယ်​တုန်းက အရုပ်​ကား​တွေထဲထည့်​​ဆော့ရတဲ့ ​လေး​ထောင့်​ဘက်​ထရီတုံး​တွေ ဘယ်​​ပျောက်​ကုန်​သလဲ ဆိုတာလည်းသိချင်​မိပါတယ်​
ခင်ဇော် says: မသိပါဘူး အေ အေ အေ အေ အေ ….!!!
ခေါင်းစဉ်မြင်ပြီး ဘယ်သူ့ကို ဆဲ ချင်တာ စကားထစ်နေတာတုန်း မှတ်လို့။
နာ့ မလဲ အဲ ဒီ ဓာတ်ခဲ က ဒုက္ခ။
ဓာတ်ခဲဆို အဲလို ခေါ်တတ်ဘူးးးး;
ငယ်တုန်းကလို တစ်တောင့်ထိုး ၂ တောင့်ထိုး ဆို အဲဒါ အကြီးးး
အသေးက ခုန ပြောတဲ့ အေအေ။
အဲဒီထက်ငယ်တာကို ဘာခေါ်မှန်းမသိလို့ သူများနဲ့မှာလို့ အသေးလို့ မှာလိုက်ရင် ပိစိလေးတွေ ပါပါလာတာ။
နောက် ရှိသေးတယ်။ ကျောက်ပြင် ပုံစံ ဓာတ်ခဲ အသေးလေးတွေ။
ဓာတ်တိုင်အောက်မှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ဖို့ ဓာတ်မကျသေးလို့
ဓာတ်ကြိုးပြုတ်ကျပြီး ဒန့်ဒန့်ဖြစ်ဖို့ ဝေးနေသေးတယ်လို့။
ဘဝမှာ ဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့ ဓာတ်ပုံဆရာက ဓာတ်ပုံမရိုက်တော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီတဲ့။
ဖားသက်ပြင်း says: ဓာတ်​ခဲကအသုံးတဲ့သ​လောက်​
ကိုယ်​သုံးတဲ့ထုတ်​ကုန်​ ရဲ့ကန်​ပနီ အလို​တော်​အတိုင်း
ပုံစံ အရွယ်​အစားနဲ့ဗို့လ့်​​တေ့ခ်ျ​ ခြားနားချက်​​တွေ​အောက်​
ကြောင်ဝတုတ် says: ကျုပ်အတွေးကတော့ဖြင့် ရိုးရှင်းမယ်ထင်ပါတယ်….
(၂) Mobility နဲ့ Light Weight ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် (၂)ခုကြောင့် ထရစ်ပါယ်အေ (AAA) ကို လူသုံးပိုများပြီး…
ဘက်ထရီနည်းပညာပိုတိုးတက်လာတော့ သိုလောင်စွမ်းအားက အရွယ်သေးလာအောင် ခြုံနိုင်လာတော့ကာ….
ပေါ့ပါးပြီးသယ်ရလွယ်စေဖို့…. လုပ်လာတာမို့ AA ထက် AAA ကိုပိုသုံးလာရာကနေ Standard ဖြစ်လာတယ်လို့…
ဖားသက်ပြင်း says: အယ်​ကာလိုင်း ကိစ္စဘက်​မှာ ​ပြောဖို့ကျန်​​နေ​သေးသဗျ
​သေချာတာက​တော့ ​အေသုံးလုံးက မပြီးပြည့်​စုံ​သေးဘူးမှတ်​ပါတယ်​
kyeemite says: .အဓိကကတော့ တာရှည်ခံအောင်
.ဂီဂီပြောတဲ့ လေးထောင့်က 9Volt ဗျ…သုံးပါသေးတယ်
ဖားသက်ပြင်း says: လင့်​ခ်​အတွက်​​ကျေး​ကျေးပါအူးမိုက်​ခ်​
ခုတ​လော ဒင်းတို့ကိုဘယ့်​နှယ့်​ စိတ်​၀င်​စား​နေတယ်​မသိဘူးရယ်​
kai says: ယူအက်စ်ကတော့.. ဘက်ထရီဘစ်ဇနက်ကို.. ဘီလီယန်ဘစ်ဇနက်ဆိုပြီး.. အိုဘားမားကိုယ်တိုင်… အတင်းရှေ့ရောက်ဖို့လုပ်နေတာပဲ..။
ကားတွေက.. ဟိုက်ဘရစ်တွေဖြစ်.. လူတွေက.. ဆဲလ်ဖုံးကိုယ်စီနဲ့ဖြစ်နေတာ.. မြင်နေရတာမို့.. သေချာတယ်လည်းထင်မိတယ်..။
La Yeik says: အူးလေးက ဘာလုပ်မို့မေးတာလဲ….အဓိက မီးလင်းရင် ပီးရောပေါ့ဂျာ…တလုံးက မီးထွန်းဖို့…တလုံးက ကက်ဆက်ဖွင့်ဖို့….အာဟိ
ဖားသက်ပြင်း says: ဒတ်​ခဲအပြင်​ ဆင်းမ်းကတ်​​တွေလည်း တ​ဖြေး​ဖြေး​သေး​ကွေးလာသဗျ
kai says: ဒီမှာတော့.. AAA, AA လေးထောင့် ၉ဗို့တွေလည်း.. တွင်ကျယ်စွာရှိပါ့..
အခုတင်.. ကျုပ်အိမ်မှာလည်း.. AAA ၂ဒါဇင်..။ AA ၂ဒါဇင်..။ 9V ၂လုံးအပိုရှိပါ့…။
ဒီနှစ်ပိုင်းထဲ ဆန်းတာဆိုလို့.. အရင် AAA, AAတွေအစား.. ၂ဆလောက်ပ်ုအသုံးခံတဲ့.. ဈေးလည်းပိုကြီးတဲ့ AAA, AAဘက်ထရီတွေထွက်လာတာပဲ..။
အိမ်မှာ ပုံမှန်သုံးနေတာ ပြန်ကြည့်တော့..
ကေဘယ်ရီမုတ် = AA
မီးလောင်ရင်အသံမြည်တဲ့အလမ်န်း၊ ကားဂိတ်ဝင်ပေါက်ရီမုတ်.. 9V
Quantum Hi-Density Core™ Technology | Duracell
Duracell’s most powerful alkaline battery ever is now our longest-lasting alkaline battery! … The breakthrough technology in Quantum’s Hi-Density Core™ usesa… Quantum provides unbeatable long-lasting alkaline power for both high and .
ဖားသက်ပြင်း says: အဲ့သည့်​ ကုန်​ပစ္စည်း format ​တွေက ကျုပ်​တို့ထင်​တာထက်​ tricky ဖြစ်​သဗျ
တခါတ​လေမှာ အ​ကောင်းဆုံး ​ဈေးအသက်​သာဆုံးက စတန်​ဒးတ်​မဖြစ်​ခဲ့တာ​တွေည်းရှိရဲ့
စွမ်းအင်​ဘက်​ ​လေ့လာတိုင်း သို​လှောင်​စွမ်းအင်​ကဏ်​တမျှာ
အလင်းဆက်@မောင်သူရ says: လောလောဆယ်တော့
ကျနော့် ဖုန်း ဘက်ထရီကို တော်တော် ကွာရှင်းပစ်ချင်နေတယ်
ပေါင်းသင်းလာတာတောင် မကြာသေးဘူး။ ခဏလေးသုံးတာနဲ့ ရှိတ်ခနဲ ကုန်သွားတတ်လို့
ဖားသက်ပြင်း says: ဖုန်းဘက်​ထရီ​တွေအ​ကြောင်းလည်းစိတ်​၀င်​စားသဗျ
ဖုန်းကျ​တော့ လိုင်းဆွဲအား သုံး​နေတဲ့အပလီ
​ပြောရရင်​ အဲ့ဒ်​လည်း စတန်းဒတ်​တခုအ​နေနဲ့​လေ့လာချင်​ပါ​သေးတယ်​
Swal Taw Ywet says: အဟေးး။
ဘောလုံးကွင်း ၄၈ကွင်းစာ အားကစားမြို့တော်ကြီးကို ခြေလျင်ပတ်ပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်မှတ်တမ်းတင် Report လုပ်နေရတာ။
အယ်လကာလိုင်းဘက်ထရီ တစုံ ၂ရက်တောင်မခံ။
သိပ်မကြာခင် အဲဒီ AA . AAA တွေပျောက်တော့မယ်ဖြစ်ပါကြောင်းးး။
မြစပဲရိုး says: ပိန်ပိန် အေအေအေအေ (အေ လေးလုံး) လဲ ရှိသေးတယ်လေ။
လေဆာ ပွိုင့်တာ တွေမှာ သုံးတာ။
ငယ်တုန်းကလဲ စည်ပိုင်း လို ဘက်ထရီ ဝဝ ကြီး တွေ သုံးခဲ့ဘူးတာ။
အခု ရာဇဝင်ထဲ ဘဲ ကျန်တော့ တာကို။
နာရီ တွေထဲ ထည့်တဲ့ ကွိုင် ဘက်ထရီ အဝိုင်း လေး တွေ လဲ အသုံးများ ပါတယ်။
အရင်က ကွန်ပျုတာ ထဲ က နာရီ အတွက်လဲ cmos battery အဝိုင်း လေးလိုတာ။
အခုနောက်ပိုင်း အဲဒါလဲ လိုတော့ မှာ မဟုတ် လို့ ထင်မိတာဘဲ။
Foreign Resident says: Battery Size နှင့် ပါတ်သက်ပြီး သိတာကတော့ ၊
အခု လူသတ်မှု ဖြစ်နေတဲ့ မင်းအုပ်စိုး ကို ၊
AA မင်းအုပ်စိုး လို့ခေါ်ကြတာဘဲ သိတယ် ။ ဟီ ဟိ ။
တော်သေးတာပေါ့ ။ AAA မဖြစ်လိုက်လို့ ။
CharTooLan says: ကျနော်ကတော့ အယ်လကာလိုင်းဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ် ဘာမှန်းမတိဘဲ အာ့ပဲဝယ်သုံးနေရလို့
အားပြန်သွင်းပီးသုံးလို့ရတာကိုပြောသလား မသိ ဒါနဲ့ ပလိုဂီနဲ့တွေ့ချင်ဒယ် တွေ့ဆုံပွဲလာမှာလားဟမ်
ဦးကျောက်ခဲ says: ဘက်ထရီနည်းပညာ တိုးတက်လာတာတော့ ဟုတ်ပါပြီ…
ဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာတော့ အခုအထိ ရေရေရာရာ မရှိသေးပါဘူး…
တီထွင်ပါရဂူများ အဲဒါလေးအထိ… စဉ်းစားကြစေချင်…
Ma Ma says: သဂျီးပြောသလိုပဲ နောက်ဆယ်စုနှစ်တွေမှာ.. ဘက်ထရီဟာ အလွန်(အလွန်)ကိုရှေ့ရောက်လာမယ်မှန်းပါတယ်..။
ခုလည်း ကားဘက်ထရီဒေါင်းရင် ထောက်နှိုးလို့ရမယ့် လွယ်ကူအဆင်ပြေတဲ့ Portable Battery ရနေပြီ။
အင်ဂျင်ပါဝါအကြီးကြီး (ကုန်ကားအထိ) ထောက်နှိုးနိုင်မယ့် ဘက်ထရီက ကွန်ပါဘူးသာသာအရွယ်ပဲရှိတယ်။
ပုံတင်ပေးချင်တာ ကွန်မန့်မှာ မတင်တတ်လို့။ ဖွဘုတ်မှာ တင်လိုက်တယ်။